ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြိုးမဲ့စနစ်များ (PWS) ကိုဝီလျံအိုကီဖီထုတ်လုပ်ရေးမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ (PWS) ကိုခန့်အပ်ဝီလျံ O'keefe ကုန်ထုတ်လုပ်မှု Manager ကို
Orlando, FL, ဇန်နဝါရီ 27, 2016 - Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ (PWS)တစ် Masque အသံကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ကြိုးမဲ့စနစ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ, အမည်ရှိထားပါတယ် ဝီလျံ O'Keefe ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမန်နေဂျာအဖြစ်။ O'Keefe သူယခင်ကမေလ 2011 ကနေဧပြီလ 2013 မှတဆင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဌာနအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာ PWS ပြန်လည်ရောက်ရှိ။
မိမိအအခန်းကဏ္ဍသစ်အတွက်, O'Keefe သစ်, ဖြတ်တောက်-အစွန်းထုတ်ကုန်များအတွက်ထုံးစံရှေ့ပြေးပုံစံ fabricating ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များ streamlining နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် RF နှင့်ကြိုးမဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်တည်းခို, PWS '' လက်ရှိထုတ်ကုန်လိုင်းကိုထိန်းသိမ်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, O'Keefe စီမံကိန်းကိုတိုးတက်မှုကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်အားလုံးစီမံကိန်းများကိုတစ်အချိန်မီပြီးစီးစေရန်အားလုံးထုတ်လုပ်တာဝန်များကို coordinate ပါလိမ့်မယ်။ O'Keefe လက်ရှိ CAD ရေးဆွဲ, ပစ္စည်းများ (BOMs) ၏ဥပဒေကြမ်းနှင့်ကုန်ကြမ်းစာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်ရှေ့ဆက်မယ့်စီမံကိန်းတွေအပေါ်ကွေး၏နေဖို့ပါလိမ့်မယ်။
"ဒါဟာနောက်ကျော PWS မှ Will ကြိုဆိုဖို့အကြီးဖြစ်ပါတယ်" ဟု PWS အထွေထွေမန်နေဂျာဂျင်မ်ဗန် Winkle ကပြောပါတယ်။ "မည် PWS အသင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားသူကုမ္ပဏီအဘို့ကြီးစွာသောမထိုက်မတန်မယ့်သင်သိရ, ငါတို့ရောင်းချသူလည်းသိ - သူတို့သူ left အစဉ်အဆက်ကတည်းကသူ့ကိုမေးပြီ။ အလိုတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှု, ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်သူ့ကိုနှင့်သူ၏ဌာနထံမှမျှော်လင့်ထားကြောင်းချောမွေ့ workflow နှင့်ထုတ်လုပ်မှုရန်အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ "
PWS မှပြန်လာသောမတိုင်မီက O'Keefe Makita အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက်နယ်မြေမန်နေဂျာအဖြစ်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကနေခဲ့ရသည်။ Makita မှာနေစဉ်, သူကဖလော်ရီဒါတစ်လျှောက်လုံး 40 လက်လီအရောင်းအဆောက်အဦများအတွက်ခဲရောင်းချမှုညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ O'Keefe လည်းထိရောက်စွာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတစ်ဦးနှစ်ဦးဒေါ်လာသန်းယှဉ်ပြိုင်ပိုင်နက်အတွင်းရည်မှန်းချက်များကျော်လွန်သွားကြောင်းရောင်းအားတိုးမြှင့်ဖို့အာရုံစိုက်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ငါသည် PWS ပြန်လာနိုင်ရန်မျှော်လင့်နှင့် RF-ပညာရှိသောသူအချို့အလွန်စိန်ခေါ်မှုကြိမ်သို့ဦးအကြောင်းတစ်ခုအစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်လိုက်လျောညီထွေမျှော်ကြောင့်ရွေ့လျား" O'Keefe ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာအကြီးထုတ်ကုန်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မယ့်ကြီးမြတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နဲ့ကျွန်မပြန်ဖွစျဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ "
Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ, အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက www.professionalwireless.com.
ဘရော့ဒ်ဝေး stagehands တစ်သုံးခြင်းဖြင့် 1936 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Masque အသံက NYC ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်အသံကအားဖြည့်ဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းအတွက်အထူးပြုတပ်ဆင်ခနှင့်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီများ, ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကိုအားကစား, ကော်ပိုရိတ်, တီဗီထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုသို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုထက် 75 နှစ်ပေါင်းကိုဂုဏ်ပြုသောကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီရဲ့တတိယမျိုးဆက်ပိုင်ရှင် Geoff မှေးညှပျကဦးဆောင်နေပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဖလော်ရီဒါအခြေစိုက် Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ, ကြိုးမဲ့နည်းပညာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ခရက်ဒစ်က "အော်ပရာ၏ Phantom", "Mamma Mia !," "ခြင်္သေ့မင်းကြီးသည်", "ဂျာစီ Boys", "နောဖပြည်၌", "Mormonism ၏စာအုပ်", "Newsies", "ပြီးတာနဲ့" အပါအဝင်အဓိကဘရော့ဒ်ဝေးပွဲများနှင့်ခရီးစဉ်ကနေအထိ နှင့် "Kinky ဖိနပ်" နှစ်စဉ် Super Bowl ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်နယူးယောက်မြို့ရဲ့နယူးအောင်ပွဲခံပြဇာတ်ရုံနှင့်သမိုင်းဝင်စိန့်ဗာသောလမဲရဲ့ဘုရားကျောင်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၏တပ်ဆင်ရန်။ Masque အသံရဲ့ 70,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေ။ ကော်ပိုရိတ်ဌာနချုပ်နှင့်အဓိကစည်းဝေးပွဲကိုစက်ရုံ midtown မန်ဟက်တန်ကနေ 21 မိနစ် 20 အရှေ့ပြည်ထောင်စုရိပ်သာ, အရှေ့ရပ်သဖော့ဒ, NJ မှာတည်ရှိပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခေါ်ဆိုမှု (201) 939-8666 သို့မဟုတ်ခရီးစဉ် www.MasqueSound.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ PWS ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-27
ယခင်: Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ 2016 ရွှေ Reel လျာထားစာရင်းကြေညာ
နောက်တစ်ခု: အီတလီရုပ်မြင်သံကြားပြရန်, Melaverde များအတွက်အသံဖုန်းများအတွက် '' 633 Capture Savory အသံ